श्रीकृष्णका भक्तलाई जनता बैंकद्वारा पानी वितरण Bizshala -
काठमाण्डौ । जनता बैंकले श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा भदौ ६ गते पाटन कृष्णमन्दिर र बुढानिलकण्ठस्थित हरेकृष्ण धाममा भक्तजनहरुलाई पिउने पानी तथा ग्लुकोज पानी वितरण गरेको छ ।
सो दिन दुवै धाममा हजारौ भक्तजनहरु ब्रत बसी कृष्ण भगवानको दर्शनका लागि आउने गर्दछन् । गर्मी मौसममा लामो समयसम्म लाइनमा बस्नु पर्दाको असुविधालाई ध्यान दिई बैंकले उपलब्ध गराएको निःशुल्क पिउने पानी तथा ग्लुकोज पानीले भक्तजनहरुलाई निकै राहात प्रदान गरेको थियो ।
सो दिन दुवै स्थानमा गरी करिब १५ हजार भक्तजनहरुलाई शुद्ध पानी र ग्लुकोज पानी उपलब्ध गराइएको बैंकले जनाएको छ।
सोहीअवसरमा बैंकले हरेकृष्णधाम, बुढानिलकण्ठका अध्यक्ष रुपेश्वर जोशीलाई बैंकको तर्फबाट रु. १ लाख नगद र ५ थान ठूलो डष्टबिन सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराएको थियो । हरेकृष्णधामले हरेक बर्ष कृष्ण जन्माष्टमीमा आउने सबै भक्तजनहरुलाई निःशुल्क भोजन (प्रसादी) को ब्यबस्था गर्ने गरेको छ ।
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र बर्दघाट, नवलपरासी स्थित रोयल...
काठमाण्डौ । युनाईटेड फाईनान्स लिमिटेडको २५ औं वार्षिकोत्सव...
सनराइज बैंकले ल्यायो सरल एसएमई कर्जा, सहुलियत ब्याजमा रु. १
काठमाण्डौ । आफूसँग ज्ञान, सीप, क्षमता र उद्यमशीलता भएका तर पूँजीको...